Baaris loo saarey sidii lagu joojin lahaa musuqa kaarka aqoonsiga - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Foto: Björn Larsson Ask /TT.
Baaris loo saarey sidii lagu joojin lahaa musuqa kaarka aqoonsiga
Baaris loo saarey sharci lagu talo jiro inuu hir-galo 2020
La cusbooneeyay torsdag 17 augusti 2017 kl 12.34
La daabacay torsdag 17 augusti 2017 kl 08.41
Dawladda ayaa maanta baaris u saari doonta sidii loo soo xag-jari lahaa musuqa iyo is-daba mariska waraaqaha aqoonsiga ee dalka Sweden.
Wasiirka shuruucda Morgan Johansson ayaa doonaya in xeer arrinkaa maareeynaya la helo ugu dambeeyn sannadka 2020.
–Waxaa muuqata in musuqa iyo is-daba mariska waraaqaha aqoonsigu yihiin tallaabooyinka ugu horreeya ee khiyaanada iyo dembiyo ballaaran lagu galo, tusaale ahaan in lagu qaato dhaqaale taageero ee kala duwan oo aan xaq loo laheyn. Waxay ka mid tahay tallaabooyinka looga hor tegeyo gabbood falka lagula kaco nidaamka hab nolol-wanaagga bulshada - välfärden, sida uu sheegay wasiirka shuruucda Sweden Morgan Johansson.
Sannadihii ugu dambeeyey ayey aad kor ugu kaceen iyada oo ciidanka ammaanku rumeey-san yahay iney suuqa ku jiraan waraaqo aqoonsi badan ee been abuur. Tusaale ahaan waxaa loo isticmaalaa dunuub laga galo goobaha ganacsiga iyo khiyaamooyin lagu sameeyo nidaamka hab-nolol-wanaagga bulshada. Waxaa dhacda inuu shakhsi keliya uu hayadda diiwaan-gelinta bulshada uga diiwaan-gashan yahay shan aqoonsi oo kala duwan.
Ciidanka ammaanka iyo baaritaanno dhowr ah oo ammuurtan laga sameeyey ayaa sheegey inay tahay caqabad iney 14 maamullo kala duwan ey xaq u leeyihiin iney soo saaraan waraaqaha aqoonsiga Sweden, tusaale ahaan hayadda canshuuraha skatteverket iyo bangiyadu. Dawladda ayaa doonaysa in la dhimo, xittaa in la isugu geeyo hayad qura oo soo saarta waraaqaha aqoonsiga.
–Baaraha ayay u taalaa inuu ka soo baaraan-dego sidii loo xadidi lahaa iyo inta loo baahan yahay. Hase yeeshee waa qayb un ka mid ah caqabadda, iney jiraan noocyo kala duwan ee waraaqo aqoonsi oo qaarkood ey sahlan tahay in la been abuuro, sida uu sheegay Morgan Johansson.
Dawladda ayaa u xil-saartay Inga-Lill Askersjö inay baare ka noqoto arrinkan. Waxaa sidoo kale loo xil-saarey suurtagalka in waraaqaha aqoonsiga lagu summadeeyo faraha iyo qaabka wejiga mulkiilaha.
Baaritaanka ayaa la fileyaa in la soo gabagabeeyo sannadka 2019, si xeerka cusubi u howl-galo horraanta sannadka xiga ee 2020. Wasiirka shuruucda, Morgan Johansson ayaa aamin-san inuu xeerka noocan ahi uu aqlabiyad ku kasban doono doorashada wixii ka dambeeya.
–Dhammaan waxaa diyaar loo yahay sidii looga hor-tegi lahaa halista dembiyada iyo khiyaamooyinka noocani oo kale, sida uu sheegay Morgan Johansson, wasiirka shuruucda iyo arrimmaha gudaha Sweden.